သျှင်နေမင်း: November 2011
အဆိုရှိသည်၊ နီးရိုကာ လီဂိုးလား စသည် ဘုရင်များသည်လည်ရက်အနည်းငယ်တွင်းအမျိုးသမီးတရာနှင့် အိပ်နိင် စွမ်းရှိသည်ဟု အဆိုရှိသည်။
(လက်တလော ပြည်တော်ပြန်ဖို့ အတွက်အလုပ်ရှုပ်နေပါသည်၊ ကိုယ်တိုင်ရေး ပိုစ့် များ မတင်နိင်သေးပါ )
Posted by သျှင်နေမင်း at 1:11 AM
ယခုခေတ်အရှေ့ တိုင်းနိင်ငံများမှအယူအဆများသည် အိမ်ထာင်ပြုမည့်ဇနီးလောင်းသည် အပျိုစင်ဖြစ်ရမယ်ဟု
သိုသော်ဤဓလေ့ ကို လူမျိုးအားလုံးက လက်မခံကြ၊ ဥပမာ မာကိုပိုလို၏မှတ်တမ်းတွင် တစ်ခေတ်ကတိဘက်နိင်ငံတွင် မည်သည်ယောက်ျားကမှ အပျိုစင်ကိုဇနီးမယားအဖြစ်လက်မခံကြချေ။
အာဖရိကအရှေ့ ဖက်ကမ်းခြေမှ အာကမ်သာဆိုသော လူမျိုးများမှာလည် အပျိုစစ်ထက် ကိုယ်ဝန်ရပြီ အမျိုးသမီး
များမှာ မျက်စိမျက်နှာပွင့် လန်းသည်၊သားသမီးရဖို့စွမ်းအင်အပြည်ရှိသော မိန်ကလေးအဖြစ် ယောက်ျားတိုင်က
ဇနီးမယာအဖြစ်ရလိုကြသည်။(......)နိင်ငံများမှ လူမျိုးများကြတော့ကလေးမီးဖွာပြီး မိန်းမများကိုမှ ဇနီးမယား
လူရိုင်းအတော်များများတွင် အမျိုးသမီးများကို ယောက်ျားပေါင်းစုံဖြင့်ဧည့်ခံစေပြီ အများနှစ်ခြိုက်ကာ ရွာ၏ကွမ်း
တောင်ကိုင်၊ပန်းတောင်ကိုင် သဘောမျိုးထာပြီး အမြတ်တနိုးလေးစားခြင်း ခံရတက်သည်ဆိုသည်။ အဆိုပါအမျိုးသမီးမျိုးကို အပိုင်ရရှိသောယောက်ျားကို တရွာလုံးက ဖိုးစွံအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်ထိ ဖြစ်တက်သေးသည်။
ဂျပန်နိင်ငံမှလည်း ဤအယူအဆရှိခဲ့ သည်၊ အချို့ သောဧည့် ခံမယ်များသည်သူဋ္ဌေးများ၏ အပျော်မယားအဖြစ်
ငွေနှင့် ဝယ်ယူသိမ်းပိုက်ခံရသည်။ထိုမိန်းမများသည် လူအများကိုလက်ခံ ၊ဆက်ဆံပြီးသူများဖြစ်ရသည်ဆိုသည်၊
ဒါကအတွေ့ အကြုံများသော မိန်းမသည် ယောက်ျားကိုပြုစုရာတွင် ပိုပြီကျွမ်းကျင်လိမ္မာသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
Posted by သျှင်နေမင်း at 3:51 AM
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိင်ငံရေးလုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အားမလို၊အားမရဖြစ်နေသူတွေ ၀မ်းသာ
အားရ ၀င်ဖက်နေရင်တော့ အချိန်ကုန်နေယုံပဲဖြစ်နေမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဆက်မဖက်ပါနဲ့ တော့ လို့ကြိုတင်တောင်ပန်း
မြန်မာပြည်ဖြစ် ဒီမိုကရေစီ စနစ်အရ လွပ်လပ်စွာ ရေးသာခွင့်ရှိနေပြီ ဆိုတော့ ကျွန်တော်ရဲ့ အတွေးအမြင်လေများ
ကို ဘလော့(ဂ်)ပေါ်တင်ကြည့် တာပါ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘာလဲ၊ဘယ်လဲ ကျွန်တော်လိုသာမန်လူတယောက်
သို့ ပေမယ့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်က လွတ်မြောက်ပြီနောက်ပိုင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို
ပခုံးချင်ယှဉ်ပြီ တိုင်းထွာမေးမြန်းရဲ တဲ့ ပြည်တွင်း၊ပြည်ပ နိင်ငံရေးဂုရုကြီတွေ အားကျပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
ဘာလဲ၊ဘယ်လဲလို့မေးမြန်ဖို့ ဆိုတာ အဆတရာမက သာလွန်လှတဲ့ နိင်ငံရေးသမားများရဲ့ဝါဒတွေအောက်မှာ
အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ အာရပ်လှိုင်းစီမဲ့ဆရာကြီတွေကို အားကျတယ်၊လူထုတိုက်ပွဲဆင်နွဲကြမယ့် ဆရာကြီတွေကို
လေးစားပါတယ်၊အထူသဖြင့်ကိုယ်ထမင်းထုပ် ကိုယ်စွဲပြီး လမ်းမပေါ်ထွက်ရဲ တဲ့လူထုများ ဦးညွှတ်မြဲပါ။
ဒါဆို မင်းကဘာကြောင့် မို့ ရေးရတာလဲ ဟု တစုံတယောက်သော နိင်ငံရေးသမားတယောက်က မေးလာခဲ့ မူ
ကျွန်တော်မစဉ်စားပဲ ဖြေမိမှာကတော့မြန်မာနိင်ငံသားဖြစ်တဲ့ အတွက် မြန်မာနိင်ငံရေးဟာ ကျွန်တော်နဲ့ လည်း
သတ်ဆိုင်ပါတယ်ဟု ဖြေမိမှာပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် နိင်ငံရေးဆိုသည်မှာ နိင်ငံသားတိုင်း၏ အရေးဖြစ်သော
ကြောင့် ပင်တည်။တနည်းအားဖြင့်ခရစ်တိုတယ်၏စကားနှင့် ပြောရလျှင် လူဆိုသည်မှာ နိင်ငံရေးသတ္တ၀ါဖြစ်သော
ကျွန်တော်လို လူပြိန်းတယောက်ရဲ့အမြင်အရ နိင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေဆိုတာ တဦးနှင့် တဦး၊ တဖွဲ့ နှင့် တဖွဲ့ 
အယူအဆမတူညီကြပဲ လွပ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲခွင့် ရှိပါတယ်၊ ရပ်ကွက်ထဲက ဘောလုံးပွဲလို၊ပရီးမီးယာ
ဘောလုံးပွဲတွေလို အားမလို၊အားမရ ဖြစ်နေသူတွေလဲ ၀င်ရောက်ဆင်နွဲလို့ ရပါတယ်၊ တကိုယ်တော် ဆန္ဒပြခြင်း၊
တကိုယ်တော်လှုပ်ရှားမှုများ၊မိမိနှင့်သဘောထားခြင်း တိုက်ဆိုင်သောလူအများနဲ့စုပေါင်း၍သော၎င်း.စသည်ဖြင့် ..
ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲ ငါတိုကိုအသိမပေးဘူး၊ ငါတို့ ပြောသလိုလဲ မလုပ်ဘူး၊ ငါတို့က ဘေးကနေပိုပြီ အကွက်မြင်တယ်
ဆိုတဲ့ဆရာ၊ဆရာကြီများကို အကြံပြုချင်တာကတော အရှေ့ တောင်အာရှဆိုတာ သူရဲကောင်းကိုယ်ကွယ်တဲ့ 
၀ါဒတွေ ရှိနေသေးပါတယ်၊ ဆရာကြီး ဒဂုန်တာယာရဲ့ စကားနဲ့ ပြောရလျှင် မင်းလည် ဒီမိုကရေးစီရဲ့သူရဲကောင်း
ဖြစ်ခွင့် ရှိပါတယ်ပေါ့ ......။
လူထုတိုက်ပွဲဆင်နွဲမယ်ဆိုတဲ့ဆရာကြီများလည် လူထုထဲကို ဆင်းရဲမှရမယ် ထင်ပါတယ၊် ဒါမှအထွေထွေသပိတ်တွေ
ရောင်စုံသပိတ်တွေကို ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်၍သော၎င်း၊မိမိ၏ အဖွဲ့ အစည်းမှသော၎င်း တဆင့် ညွှန်ကြားပြီ လုပ်ဆောင်လျှင်
အတိုင်းအထက်အလွန် ကောင်းမွန်မည်ဖြစ်သည်၊ဒီလိုမှ မဟုတ်ပဲ အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ဆင်နွဲနေလျင် လူရယ်စရာဖြစ်နေမှာ
အာရပ်လှိုင်း စီးမယ်ဆိုသော ဆရာကြီများလည်း မြန်မာပြည်ရဲ့ လူဦရေအများဆုံးဖြစ်သော အခြေခံလူတန်စား၊
လယ်သမားများကို ဖေ့ ဘွတ်တွေ ၊တွစ်တာများ၊ဖိုရမ်များကနေတဆင့်လှုံဆော်စည်းရုံးရအောင် ကွန်ပြူတာအများအပြား
ဖြန့် ဝေ၊အင်တာနက်သုံးတက်အောင် သင်ပေးဖို့ တော့ လိုပါတယ်...။
မြန်မာနိင်ငံကို ချစ်လွန်းလို့ သာ ပြောနေ၊ရေးနေရပါတယ် ပြည်ပမှာအေးအေးဆေးဆေး နေလို့ ရတယ်ဆိုပြီ
ဟိုလို လုပ်ပါလား၊ဒီလိုလုပ်ပါလားဆိုတဲ့နိင်ငံရေးဂုရုလူကြီးများအတွက် မြန်မာနိင်ငံရဲ့လူငယ်ထုကိုယ်စားပြောချင်
တာကတော့နေသာသလိုသာ နေပါ ဆရာတို့ ရယ်လို့ ...........။။
ဒီလို ပြောလိုက်၊ရေးလိုက်တဲ့အတွက် မင်းကဘာကောင်လဲ၊ငါက ဘာကောင်လဲ ဆိုပြီ အပြန်အလှန် ဆဲကြမယ်
ဆိုရင်ဖြင့်ခဏလောက်တော့စောင့် ပေးပါ၊ အစွန်းရောက် ဒီမိုကရေစီသမားများ၊ ပညာတော်သင် ညီအစ်အကို
တချို့ ဆီက ဆဲနည်းတွေ သင်ယူရပါအုံးမယ်..။။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိင်ငံရေးလုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီ ဘာလဲ၊ဘယ်လဲ လို့ မမေးခင် ကိုယ့်ကို
ကိုယ် ပြန်လည်သုံးသတ်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့် မယ်၊ကိုယ်တိုင် အစွမ်းအစ ရှိရင်လုပ်တွေ့လုပ်ပြပါ၊ ကိုယ်ထမင်းထုပ်
ကိုယ်ဆွဲပြီ လူဘယ်နှစ်ယောက်ပါလာမလဲလို့ ..လက်တွေ့ မပါပဲ ဘေးထိုင် ဘုပြောနေလျှင်တော့အချင်းချင်း
စိတ်ဝမ်းကွဲနေယုံပဲ ရှိတော့ မှာပေါ့ .....။။
ဘာရယ်ညာရယ်တော့ဟုတ်ပါဘူး ဆရာ၊ဆရာကြီးများလိုပဲ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရေးကြည့် ပြောကြည့် တာပါ။
Posted by သျှင်နေမင်း at 1:43 AM
ည ၉း၂၅ မိနစ်
woodland MRT ရဲ့ သိပ်မဝေးတဲ့ လမ်းမကြားထဲမှာ မှုန်ပျပျနီယွန်မီး အလှကိုသတိမထားပဲ ခပ်သွက်သွက် လျောက်
လာတဲ့လူတယောက် ၊တကယ်တမ်း သူသွားနေတဲ့လမ်းကြားလေးက သိပ်ပြီ safe မဖြစ်ပါဘူး၊ မူးရစ်သောက်စား
နေကြတဲ့ထိုင်းလူမျိုးတချို့ ၊စီကရက် မှောင်ခိုရောင်းနေသော တရုတ်လူမျိုးတချို့ ၊မလေးရှာ ဂိုဏ်စတား များ
ဒီလမ်းကြာထဲမှာ ဗိုလ်ကျ လုယက်မှုတွေ မကြာခဏဖြစ်တက်လို့ ပါ ။
ခပ်သွက်သွက်လမ်းလျှောက်လာတဲ့သူက ကျွန်တော်ပါ ၊အလုပ်ပြန်ချိန်နောက်ကျတဲ့အတွက်ဒီလမ်းက ဖြတ်ပြီပြန်
လာခဲ့ တာပါ၊ လမ်းတ၀က်လောက်ရောက်ခါနီးကာမှ သိသိကြီးနဲ့မှားမှန်သိသွားရပါတယ်၊ ဘာကြောင့် လည်ဆိုလျှင်
ကျွန်တော်ရဲ့ အရှေ့ မှာ လက်နက်အပြည့် အစုံနဲ့မလေးဂိုဏ်စတား ၄ယောက်.....
ကျွန်တော်သွေးကြောင်ပြီ နောက်လှည့် ဖို့မဆုံးဖြတ်ခဲ့ ပါဘူး၊ သူတို့ အဖွဲ့ ကို မသိချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ခေါင်းငုံ့ ကာ
မြင်ကွင်းရှေ့ မှာ တွေ့ ရတာကတော့ကျွန်တော်ထင်တဲ့ အတိုင်း တုတ်ခိုင်လှတဲ့ခြေသလုံးတွေမှာ ဆေးမင်ကြောင်
အရုပ်ပြည့် နဲ့မလေးဂိုင်စတားခေါင်ဆောင် သူရဲ့ နောက်မှာ ပေဆောင်ဆောင်ရပ်နေတဲ့ချာတိတ် ၃ယောက်..
ကျွန်တော်ဖြစ်လာမယ့်ပြဿနာအတွက် သွေးအေးအေးဆုံးဖြတ်ချက်တခု ချလိုက်တယ်၊ မြန်မာသတ္တိတော့ ပြရတော့ မယ်လို့ ..
အကယ်၍သာ သူတို့ နဲ့ကျွန်တော်ရင်းနှီးလျှင် ပြောပြလိုက်ချင်ပါသေးတယ် ၊မြန်မာပြည်ရဲ့ဆိုးသွမ်းလူငယ်ဘ၀
ကို ဘာကြောင့် ကျောခိုင်းခဲ့ ရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း၊ အသက် ၂၆ နှစ်အရွယ်ထဲမှာ ချိန်ပွဲတွေ၊အုပ်စုလိုက်ရန်ပွဲ
တွေ အခါ ၂၀ ထက်မက ဆင်နွဲခဲ့ ဘူတယ်ဆို့ အကြောင်းတွေပါ.။
ကျွန်တော် ရှေ့ တဲ့ တဲ့ မှာလာရပ်နေတဲ့ဂိုဏ်စတားခေါင်ဆောင်က လုပ်သက်တော်တော်ရင့် နေပုံရပါတယ်။
သွေးအေးအေးနဲ့ကျွန်တော်ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်..
"ဟေ့သူငယ်ချင်း အဆင်ပြေရဲ့ လား"
"အို ဘုရားသခင် ...မင်း ကြင်နာတက်သာပဲ" "ဘာ လူမျိုးလဲ"
"ကောင်းပြီ..ဒါဆို မင်းမှာပါတဲ့ပိုက်ဆံတွေရယ်၊ လက်ပတ်နာရီရယ် မင်းနားက အရောင်တွေလက်နေပါလား"
"ဟုတ်လား ဒါဆို အဲဒါပါ ချွတ်လိုက်"
"ငါ မပေးနိင်ဘူ ဆိုရင် မင်းတို့ဘာလုပ်မလဲ"
"မင်း အသားတွေနာကျင်ကုန်မှာပေါ့...နာစေချင်လို့ လား"
"ကောင်းပြီ...ငါမင်းကို ပေးပါ့ မယ့် "
သူကျေနပ်စွာနဲ့ ခါးထောက်ပြီ ကျွန်တော်ကိုကြည့် နေတယ်....
ကျွန်တော် ကျောပိုအိပ်ထဲကနေ ပိုက်ဆံအိတ်ရှာနေသလိုနဲ့သူရဲ့ပျော့ ကွက်တွေကိုရှာကြည့် နေမိတယ်...
"အကောင်နဲနဲကြီးရင် အားနဲနဲပဲ ဆိုက်ရတယ်ဆိုတာ လူမိုက်လောက ကထွက်လာတာပါ" အကြောင်းမဲ့ ဟုတ်ပါဘူး
တွေ့ လိုက်ပါပြီ ...သာမန်ထက်အနည်းငယ်ကြီးနေသော သူရဲ့ လည်ဇလုတ်ကို.........
တကိုယ်လုံးမှာ ရှိတဲ့ အင်အားများကို လက်သီးထဲကို ပို့ ပြီ အားကုန်လွဲထိုးချလိုက်တယ်....
သူလည်ပင်း သူကိုင်ပြီး မျက်လုံးပြူ၊မျက်ဆံပြူနဲ့နောက်ကို ၄ ၅လှမ်းခန့် ဆုတ်ပြီး ပစ်လဲကျသွာတယ်...
မလေး ချာတိတ် နှစ်ကောင် သူအနားကို ပြေးသွားပြီ ပွေ့ ချီနေတုန်း ...နောက်တယောက်က ကျွန်တော်ကို
ကျောင်းသာဘ၀က ရန်ပွဲတွေနဲ့ ရင်းနှီးနေတဲ့ကျွန်တော် ဒီအကွက်က ရိုးစင်းလွန်းနေပါတယ်......
အနားရောက်လာတဲ့သူရဲ့ ရိုက်ချက်တွေကို အသာငုံ့ ရှောင်လိုက်ပြီ ကျွံဝင်လာတဲ့ချာတိတ် မျက်နှာကို လက်ဖနောင့် 
နဲ့ခပ်စပ်စပ်ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်...
လက်ဖနောင့် မှာ ကပ်ပါလာတာကတော့စေးကပ်ကပ်နဲ့ သွေးစများ.....
အဲဒီအချိန်မှာ ရိပ်ခနဲ ၀င်လာတဲ့ အရာ....
" ၀ှီး "
ကျွန်တော်ခေါင်းငုံ့ရှောင်လိုက်ပေမယ့်နောက်ကျသွားခဲ့ ရတယ်....
ဆံချည်မျှင်တွေရယ် တစက်စက်ကျလာတဲ့သွေးစက်တွေရယ် ...ဘီယာပုလင်းအကွဲအပိုင်းအစများ...
နောက် ချာတိတ်တယောက်က ကျွန်တော်ကို ခရစ်ကတ်ကစားတဲ့တုတ်ချောင်းနဲ့ ပြေးဝင်ရိုက်ပြန်တယ်..
ဒီလိုအနီးကပ် တိုက်ခိုက်နည်းတွေမှာ ဗန်တိုတိုက်ကွက် ၃ကွက်လောက်နဲ့အပြီးသတ်တိုက်ခိုက်လို့ ရပါတယ်..
ကျောင်းသာ ဘ၀က ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် သင်ယူခဲ့ ဘူတဲ့သိုင်းကွက်တွေက ဒီနေရာတွေမှာ အသုံးဝင်သွားပါတယ်..
ကျွန်တော် ခေါင်းငုံ့ ရှောင်လိုက်ပြီး ရှေ့ တကွက်တက်ကာ ချာတိတ်ရဲ့ရှိုက်တည့် တည့် ကို အားကုန်ထိုးသွင်းပြစ်လိုက်တယ်.
ဆိုတဲ့ အသံနဲ့ အတူ ကတ္တရာလမ်းမပေါ်မှာ ခွေကနဲကျသွားတယ်....
နောက် မောင်းချဓားကိုင်ထားတဲ့ချာတိတ်တယောက် ကျွန်တော်ကို အထူးအဆန်းသတ္တ၀ါ တကောင်လို ကြောင်ပြီးကြည့် နေတယ်...
ပွဲသိမ်းသွားပြီဆိုတာ ကျွန်တော်သိလိုက်ပြီ...ရန်ပွဲက သိပ်တော့ မကြာလိုက်ပါဘူး..
ဒီချာတိတ် ကျွန်တော်အနားကို မလာနိင်ပါဘူး အဖွဲ့ ကောင်းလို့ သာ ဂိုဏ်စတားလုပ်နေတာ သတ္တိမရှိပါဘူး....
ကျွန်တော် ကျောပိုအိတ်ကို ကောက်ယူလိုက်ပြီ ချာတိတ်ကို နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်...
"မင်း သူငယ်ချင်းတွေ ကံကောင်းပါစေ"
ခပ်သွက်သွက်ထွက်လာခဲ့ တယ်..ဒီလမ်းက နောက်တကြိမ်ကြရင် ကျွန်တော်အတွက် သေမင်းတမန်လမ်းကြားဖြစ်သွာနိင်ပါတယ်..
ရီဝေေ၀မူးနောက်နောက်နဲ့ခေါင်းကိုအနိင်နိင်ထိန်းရင်း သိပ် မဝေးတဲ့အဆောင်ဖက်ကို လမ်းလျောက်ပြီ ပြန်လာခဲ့ တယ်.
အဆောင်ထဲရောက်တော့အားလုံးအိပ် နေကြပြီ...ကျွန်တော်လည် ရေးချိုးခန်းထဲ တန်းဝင်ပြီ ခေါင်းက ဒဏ်ရာကို ကြည့် လိုက်တယ်..
စိုရွှဲပြီ စေးကပ်နေတဲ့ သွေးတွေ ဦးခေါင်းမှာရော အင်္ကျီမှာပါ ရဲရဲတောက်နေလို့ ပေါ့ ..
မှန်ထဲမှာ ကိုယ့်ကို ကိုယ်ကြည့် ပြီ တိုးတိုးလေပြောလိုက်မိတယ်..
"မြန်မာ့သွေးမို့ရဲရဲနီနေသလား မသိဘူးလို့ ............."
လေးစာလျှက်.................။ ။ ။
သျှင်နေမင်း...............။ ။ ။
Posted by သျှင်နေမင်း at 8:24 AM